Izidlali ze-DVD namarekhodi
Le migomo nemibandela ("Imigomo", "Isivumelwano") uyisivumelwano phakathi koMsebenzisi Wewebhusayithi ("Isisebenzisi Sewebhusayithi", "thina", "thina" noma"yethu") futhi wena ("Umsebenzisi", "yakho" noma"yakho"). Lesi Sivumelwano sibeka obala imigomo nemibandela evamile yokusebenzisa kwakhoblogmal .com iwebhusayithi kanye nanoma yimiphi imikhiqizo noma amasevisi ayo (ngokuhlangene,"Iwebhusayithi" noma"Amasevisi").
Uma udala i-akhawunti kuwebhusayithi , unesibopho sokugcina ukuvikeleka kwe-akhawunti yakho futhi unesibopho esiphelele sayo yonke imisebenzi eyenzekayo ngaphansi kwe-akhawunti kanye nanoma yiziphi ezinye izenzo ezithathwe ngokuphathelene nayo. Ukunikeza ulwazi lokuxhumana olungamanga lwanoma yiluphi uhlobo kungase kuholele ekunqanyulweni kwe-akhawunti yakho. Kufanele usazise ngokushesha nganoma yikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwe-akhawunti yakho nanoma yikuphi okunye ukwephulwa kwezokuphepha.Ngeke sibe nesibopho sanoma yiziphi izenzo noma ukweqa nguwe, kuhlanganisa nanoma ikuphi ukulinyazwa kwanoma iluphi uhlobo ngenxa yalezo zenzo noma ukweqiwa. misa okwesikhashana, vala, noma susa i-akhawunti yakho (noma iyiphi ingxenye yayo) uma sithola ukuthi wephule noma yikuphi ukunikezwa kwalesi Sivumelwano noma ukuthi ukuziphatha kwakho noma okuqukethwe kwakho kungalimaza isithunzi sethu nokuthakazelelwa kwethu. Uma sisusa i-akhawunti yakho ngenxa yezizathu ezingenhla. , awukwazi ukuphinda ubhalisele Izinkonzo zethu vimba ikheli lakho le-imeyili kanye nekheli lephrothokholi ye-inthanethi ukuze uvimbele ukubhalisa okwengeziwe.
Asinabanikazi banoma iyiphi idatha, ulwazi noma impahla ("Okuqukethwe") ozithumela kuwebhusayithi ngesikhathi usebenzisa Isevisi. Uzoba nesibopho sodwa sokunemba, ikhwalithi, ubuqotho, ukuba semthethweni, ukwethembeka, ukufaneleka, kanye nobunikazi bendawo esunguliwe noma ilungelo lokusebenzisa konke okuqukethwe okuthunyelwe. Singase, kodwa singabi nasibopho sokuqapha Okuqukethwe Kuwebhusayithi ethunyelwe noma edalwe nguwena kusetshenziswa Izinkonzo zethu. Ngaphandle uma kugunyazwe nguwe ngokuqondile, ukusebenzisa kwakho Iwebhusayithi akusiniki ilayisense yokusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukulungisa, ukuguqula, ukushicilela noma ukusabalalisa okuqukethwe okudalwe nguwe noma okugcinwe ku-akhawunti yakho yomsebenzisi ngenjongo yokuthengisa, ukumaketha nanoma yiziphi izinjongo ezifanayo. Kodwa usinika imvume yokufinyelela, ukukopisha, ukusabalalisa, ukugcina, ukudlulisa, ukufometha kabusha, ukubonisa nokwenza okuqukethwe kwe-akhawunti yakho yomsebenzisi njengoba kudingekile kuphela ngenjongo yokukunikeza Izinkonzo. Ngaphandle kokunciphisa noma yikuphi kwalezo zithulo noma iziqinisekiso, sinelungelo, nakuba singesona isibopho, ngokubona kwethu sodwa, senqabe noma sisuse noma yikuphi okuqukethwe, ngokubona kwethu okunengqondo, okwephula noma yiziphi izinqubomgomo zethu noma okulimazayo nganoma iyiphi indlela. noma okungamukeleki.
Senza izipele ezivamile zeWebhusayithi kanye Nokuqukethwe, nokho, lezi zipele ezezinjongo zethu zokuphatha kuphela futhi aziqinisekisiwe nangayiphi indlela. Unesibopho sokugcina izipele zakho zedatha yakho. Asihlinzeki nganoma yiluphi uhlobo lwesinxephezelo ngedatha elahlekile noma engaphelele esimweni lapho izipele zingasebenzi kahle. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuze siqinisekise izipele eziphelele nezinembile, kodwa singathathi isibopho ngalo msebenzi.
Izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi
Nakuba le Webhusayithi ingase ixhunywe kwamanye amawebhusayithi, asikho, ngokuqondile noma ngokungaqondile, okusho noma yikuphi ukuvunyelwa, ukuhlotshaniswa, uxhaso, ukuvumela, noma ukusebenzelana nanoma iyiphi iwebhusayithi exhunyiwe, ngaphandle uma kushiwo lapha. Asinasibopho sokuhlola noma sokuhlola, futhi asikugunyazi ukunikezwa, kwanoma yimaphi amabhizinisi noma abantu ngabanye noma okuqukethwe kumawebhusayithi abo. Asithwesi isibopho noma isibopho ngezenzo, imikhiqizo, amasevisi, nokuqukethwe kwanoma yiziphi ezinye izinkampani zangaphandle. Kufanele ubuyekeze ngokucophelela izitatimende zomthetho neminye imibandela yokusebenzisa noma iyiphi iwebhusayithi oyitholayo ngesixhumanisi esisuka kule Webhusayithi. Ukuxhuma kwakho kunoma imaphi amanye amawebhusayithi angekho kusayithi kuyingozi yakho.
Ngesikhathi sokusebenzisa Iwebhusayithi, ungangena ekubhaleleni noma ubambe iqhaza ekunyusweni kwabakhangisi noma abaxhasi abakhombisa izimpahla zabo noma izinsizakalo ngeWebhusayithi. Noma yimuphi umsebenzi onjalo, nanoma yimiphi imigomo, imibandela, iziqinisekiso noma izethulo ezihlobene nomsebenzi onjalo, kuphakathi kwakho kuphela nenkampani yangaphandle esebenzayo. Ngeke sibe nesikweletu, isibopho noma isibopho nganoma yikuphi ukuxhumana okunjalo, ukuthenga noma ukukhushulwa phakathi kwakho nanoma yimuphi omunye umuntu onjalo.
Ngokungeziwe kweminye imigomo njengoba ibekwe kuSivumelwano, unqatshelwe ukusebenzisa Iwebhusayithi noma Okuqukethwe kwayo: (a) nganoma iyiphi injongo engekho emthethweni; (b) ukunxenxa abanye ukuba benze noma bahlanganyele kunoma yiziphi izenzo ezingekho emthethweni; (c) ukwephula noma yimiphi imithetho yamazwe ngamazwe, yefederal, yesifundazwe noma yombuso, imithetho, imithetho, noma izimiso zendawo; (d) ukwephula noma ukwephula amalungelo ethu empahla yengqondo noma amalungelo empahla yobuhlakani babanye; (e) ukuhlukumeza, ukuhlukumeza, ukuthuka, ukulimaza, ukuhlambalaza, ukunyundela, ukululaza, ukusabisa, noma ukubandlulula ngokusekelwe kubulili, ukukhetha ubulili obuthile, inkolo, uhlanga, uhlanga, ubudala, imvelaphi yobuzwe, noma ukukhubazeka; (f) ukuhambisa ulwazi olungamanga noma oludukisayo; (g) ukulayisha noma ukudlulisa amagciwane nanoma yiluphi olunye uhlobo lwekhodi eyingozi engasetshenziswa noma engase isetshenziswe nganoma iyiphi indlela ezothinta ukusebenza noma ukusebenza Kwesevisi noma kwanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, amanye amawebhusayithi, noma i-inthanethi; (h) ukuqoqa noma ukulandelela ulwazi lomuntu siqu lwabanye; (i) ukwenza ugaxekile, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, ikhemisi, izaba, isicabucabu, ukukhasa, noma ukuklebhula; (j) nganoma iyiphi inhloso eyichilo noma yokuziphatha okubi; noma (k) ukuphazamisa noma ukweqa izici zokuphepha zesevisi nanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, amanye amawebhusayithi, noma i-inthanethi. Sinelungelo lokumisa ukusebenzisa kwakho Isevisi nanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene ngokwephula noma yikuphi ukusetshenziswa okunqatshelwe.
Ngokwezinga eligcwele elivunyelwe umthetho osebenzayo, akukho mcimbi uMsebenzi Wewebhusayithi, abasebenzisana naye, izikhulu, abaqondisi, abasebenzi, ama-ejenti, abahlinzeki noma abanikezeli bamalayisense babophezelekile kunoma yimuphi umuntu (a): noma yikuphi okungaqondile, okungaqondile, okukhethekile, okujezisayo, ukukhava. noma umonakalo owumphumela (okuhlanganisa, ngaphandle komkhawulo, umonakalo wenzuzo elahlekile, imali engenayo, ukuthengiswa, umusa, ukusetshenziswa noma okuqukethwe, umthelela ebhizinisini, ukuphazamiseka kwebhizinisi, ukulahlekelwa ukonga obekulindelekile, ukulahlekelwa yithuba lebhizinisi) nokho okubangelwe, ngaphansi kwanoma yimuphi umbono wesikweletu, okuhlanganisa, ngaphandle komkhawulo, inkontileka, ukwephulwa komthetho, iwaranti, ukwephulwa kwesibopho esisemthethweni, ubudedengu noma okunye, ngisho noma uMsebenzisi Wewebhusayithi elulekwe mayelana nokwenzeka komonakalo onjalo noma ubengase awubone kusengaphambili lowo monakalo. Ngokwezinga eliphezulu elivunyelwe umthetho osebenzayo, isikweletu esihlanganisiwe soMsebenzisi Wewebhusayithi kanye nabasebenzisana nabo, izikhulu, abasebenzi, ama-ejenti, abahlinzeki kanye nabanikezeli bamalayisense, okuhlobene nezinkonzo kuzokhawulelwa enanini elingaphezu kwedola elilodwa noma noma yiziphi izimali ezikhokhwa ngempela ngokheshi. ngawe ku-Website Operator esikhathini esiyinyanga eyodwa ngaphambi komcimbi wokuqala noma isigameko esidala leso sikweletu. Imikhawulo nokukhishwa kuyasebenza futhi uma leli khambi lingakunxephezeli ngokugcwele nganoma yikuphi ukulahlekelwa noma ukuhluleka kwenjongo yalo ebalulekile.
Uyavuma ukunxeshezelwa nokubamba Umsebenzisi Wewebhusayithi namanxusa akhe, abaqondisi, izikhulu, abasebenzi, nama-ejenti angenabungozi futhi ngokumelene nanoma yiziphi izikweletu, ukulahlekelwa, umonakalo noma izindleko, okuhlanganisa izimali zabameli ezifanele, ezitholwe ngokuphathelene noma ezivela kunoma yimuphi umuntu wesithathu. izinsolo, izimangalo, izenzo, izingxabano, noma izimfuno ezigonyelwa kunoma yiziphi ngenxa noma ezihlobene Nokuqukethwe kwakho, ukusebenzisa kwakho Iwebhusayithi noma Izinkonzo nanoma yikuphi ukuziphatha kabi ngamabomu ohlangothini lwakho.
Wonke amalungelo nemikhawulo equkethwe kulesi sivumelwano ingasetshenziswa futhi izosebenza futhi ibophe kuphela lapho ingaphuli noma yimiphi imithetho esebenzayo futhi ihloselwe ukuba ikhawulelwe ngokwezinga elidingekayo ukuze bangenzi lesi Sivumelwano sibe ngokungemthetho, esingavumelekile. noma engaphoqeleleki. Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa noma ingxenye yanoma yikuphi ukuhlinzekwa kwalesi Sivumelwano kuzothathwa njengokungekho emthethweni, okungalungile noma okungaphoqeleleki yinkantolo enegunya lokulawula, kuyinhloso yezinhlangothi ukuthi izinhlinzeko ezisele noma izingxenye zaso zizokwenza isivumelwano sazo maqondana neSivumelwano. isihloko kulokhu, kanye nazo zonke lezi zinhlinzeko ezisele noma izingxenye zakhona zizohlala zisebenza ngokugcwele futhi zisebenza.
Sinelungelo lokushintsha lesi Sivumelwano noma izinqubomgomo zaso eziphathelene neWebhusayithi noma Amasevisi nganoma yisiphi isikhathi, sisebenza lapho sithumela inguqulo ebuyekeziwe yalesi Sivumelwano kuwebhusayithi. Uma senza kanjalo, sizobuyekeza idethi ebuyekeziwe ezansi kwaleli khasi. Ukusetshenziswa okuqhubekayo kweWebhusayithi ngemva kwanoma yiziphi izinguquko ezinjalo kuzohlanganisa imvume yakho kulolo shintsho. Inqubomgomo idalwe nge I-WebsitePolicies.
Ukwemukelwa kwale migomo
Uyavuma ukuthi usifundile lesi Sivumelwano futhi uyavumelana nayo yonke imigomo nemibandela yaso. Ngokusebenzisa Iwebhusayithi noma Amasevisi ayo uvuma ukuboshwa yilesi Sivumelwano. Uma ungavumi ukuthobela imigomo yalesi Sivumelwano, awugunyaziwe ukusebenzisa noma ukufinyelela Iwebhusayithi kanye Nezinsizakalo zayo.
Uma unemibuzo mayelana nalesi Sivumelwano, sicela usithinte.
Lo mbhalo ugcine ukubuyekezwa ngo-Ephreli 24, 2019
Sitemap - RSS - DMCA - Inqubomgomo Yobumfihlo - Imigomo Yesevisi
Ngaphandle kwalapho kuphawulwe khona ngenye indlela, le webhusayithi ilayisensi ngaphansiIlayisensi ye-Creative Commons Attribution 3.0 Unported.